I-Studio Sesimanje Nesibhakabhaka - Main Street - I-Airbnb
I-Studio Sesimanje Nesibhakabhaka - Main Street
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-WalQinn
Zizwa iSarajevo ehlala efulethini lethu lesimanje lesitudiyo eliseduze neFlame Laphakade elidumile! Isikhungo sedolobha kanye nazo zonke izindawo ezikhangayo ezinkulu kuqhele ngezinyathelo ezimbalwa!
Leli fulethi le-studio liza nombhede wenkosi onethezekile.
Igumbi lokugezela lihlome ngokuphelele futhi linikeza zonke izinsiza nezinsiza ezidingekayo ukuze uhlale kahle!
Sazise uma kukhona ongathanda ukukwazi mayelana nefulethi noma ngedolobha :)
Ifulethi lethu lesitudiyo lisendaweni enhle yokuhlala eduze neLangabi Laphakade, izinyathelo ezimbalwa kuphela ukusuka enhliziyweni yenkaba yedolobha kanye nazo zonke ezinye izinto ezikhangayo ezinkulu.
Ifulethi lethu lesitudiyo lilinganiselwa ku-30sqm.
Iza nombhede wosayizi wohlobo onethezekile.
Ikhishi likuhlomele ukuhlola amakhono akho okupheka. Uma ungekho esimweni sokupheka, kunendala yezindawo zokudlela ezidumile eduze. :)
Uma udinga ukuhlala ukhiqiza ohambweni lwakho, ifulethi lethu liza nendawo yehhovisi lasekhaya elizinikele!
Indlu yokugezela ingeyesimanje futhi isebenza ngokugcwele egcwele amathawula amasha kanye nesethi yezinsiza ezigcwele.
Siphinde futhi sinikeze ikhofi lendawo, i-Nescafe kanye nenhlobonhlobo yetiye.
I-Cable TV ikunikeza iziteshi ezihlukahlukene zasekhaya nezamazwe ngamazwe, futhi sinikeza nokukhethwa okubanzi komagazini basekhaya nabamazwe ngamazwe kanye namaphephandaba!
Ifulethi linendawo emaphakathi eduze kwesikhungo esidumile se-BBI.
Ifulethi liseduze neBhange Elikhulu, indawo edumile yokuhlangana yabantu. I-"Eternal Flame" edumile itholakala kuphela ngamagxathu ambalwa ukusuka efulethini ngenkathi zonke izimpawu zomhlaba ezingokomlando zihamba ibanga ukusuka efulethini.
Kunenqwaba yezitolo zokudla, izindawo zokudlela nezitolo zekhofi emizuzwini embalwa nje ukusuka efulethini.
Umakhelwane uphephe kakhulu!
Okuningi noma okuncane njengoba ufuna! Sicela usazise futhi sizokwenza konke ukwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke.